Telefaona Joiwo IP misy fampiasa maro-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Telefaona Joiwo IP misy lahasa maro
FIAINANA: 2019-05-29 HITS: 35
Ny telefaona IP Joiwo dia misy ny telefaona IP tsy misy rano / telefaona IP-porofo / Telefaona IP manohitra Vandal.
Ny protokolon'ny fifandraisana misy eo amin'ny tamba-jotra IP (Internet Protocol), izany hoe, ny protokolola natao hifandraisan'ny tambajotram-pifandraisana amin'izy samy izy, ary ny telefaona IP no protokolon'ny serasera miaraka amin'ny protokolan'ny tambajotra IP, sy ny seranan-tsambo (na WiFi) dia ny interface indrindra, fitaovana an-tariby tsy miankina miaraka amina antso sy fiantsoana antso, matetika dia mila ampiasaina amin'ny switch IPPBX na amin'ny IMS. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia serivisy fandefasana feo amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny Internet. Teknolojia fifandraisana vaovao izay mampiasa Internet handefasana feo ho fampitaovana amin'ny fifandraisana amin'ny feo.
Taloha, telefaona IP no tena nampiasaina tao amin'ny intranet an'ny orinasa lehibe. Ireo teknisianina dia afaka mampiasa indray ilay tambajotra mitovy mba hanomezana tolotra data sy feo. Ho fanampin'ny fanamorana ny fitantanana dia afaka mampitombo ny vokatra izy ireo. Noho ny vidin'ny fifandraisana ambany dia ambany (saram-pifandraisana Internet 6 cents isan-jato isan-minitra, ary ny saram-pifandraisana iraisam-pirenena ho an'ny telefaona tsotra, izay mihoatra ny folo yuan isan-minitra), dia antsoina koa hoe finday mora vidy.
Amin'izao fotoana izao, ny tsena dia efa nanao vokatra finday IP. Io karazana vokatra io dia mampifangaro ny telefaona tsotra sy ny vavahady fidirana amin'ny feo. Ny kaonty sy ny teny miafin'ny kaonty dia voamarina amin'ny alàlan'ny adiresy mac an'ny mpizara softswitch amin'ny alàlan'ny telefaona, ary ny antso rehetra dia azo atao amin'ny alàlan'ny tariby tambajotra. Mandritra izany fotoana izany, maimaimpoana ny telefaona anatiny, ary ireto finday IP ankapobeny ireto dia manana ireto asany manaraka ireto:
1. Protocol Control Control: Support protokol SIP na protokol H323,
2. Fanohanana famoahana feo: G.711, G723.1, G.729A,
3, feo mazava, antoka QoS feo
4, ampifanaraho amin'ny tontolon'ny tambajotra isan-karazany, tena hiditra amin'ny asan'ny NAT
5, tohano ny protokol PPP / PPPoE, tohano ny dialy mandeha ho azy, ny fanaovan-tsoa miverina fanaingoana
6, fanohanana ny DNS, ny protokol DHCP
7, tohano ny adiresy IP miovaova, mihetsiketsika, manohana ny laharam-pahamehana fianarana adiresy IP
8, manohana ny fitantanana tranonkala, Telnet, fametrahana ny TFTP
9, tohano ny nomeraon'ny transceiver DTMF
10, tohano ny nomeraon'ny CID
Telefaona Joiwo Jail amin'ny Only the Brave
Joiwo dia nandefa telefaona fonja 3,000 tamin'ny 17 Jona